China Villa Dhizaina fekitori uye vagadziri | Zhenyuan
Villa:ndiko kuwedzera kwakaringana kwekugara kwemhuri, ndicho chirevo chekusimudzira, chepamusoro-pekupedzisira, chakazvimiririra uye hupfumi. Iyo inogara gadheni yakavakirwa mudhorobha kana nzvimbo inoyevedza yekutandara Inzvimbo yekunakidzwa nehupenyu.
Zvinowanzo nzwisiswa kuti, pamusoro pechakakosha basa re "kurarama", inzvimbo yepamusoro inogara inoratidza hunhu hwehupenyu uye hunhu hunofadza. Mupfungwa dzazvino uno, inzvimbo yakazvimiririra yekugara-gadheni, yakavakirwa muzvivakwa zvakazvimirira.
Villas dzakakamurwa mumhando shanu dzinotevera: dzimba dzemhuri imwe chete, dzimba dzekugara, dzimba mbiri, dzimba dzakakwirira, dzimba dzekugara.
* Imwe mhuri villa
Ndokunge, chivanze chimwe chine nzvimbo yakazvimirira pamusoro uye yega gadheni ndima pazasi imba yega yega, iyo inoratidzwa senzvimbo yakazvimirira yakatenderedza mativi ekumusoro neepasi. Kazhinji, pane akasvibira Spaces uye matare ane dzakasiyana nzvimbo dzakatenderedza imba. Iyi mhando yeimba ndeimwe yekare-kare, yakasimba kuvanzika, yakakwira musika mutengo, ndiyo zvakare yekupedzisira fomu yekuvakisa dzimba.
* Villas mbiri
Icho chigadzirwa chepakati pakati peimba yeguta uye imba yakavharirwa, inoumbwa nezvikamu zviviri zveimba yeguta. Imba inonyanyo kuzivikanwa ye2-PAC muUnited States imhando yeimba mbiri-parishi. Kuderedza kuwanda kwenharaunda uye kuwedzera mwenje pamusoro peimba kuita kuti ive nehupamhi hwekunze nzvimbo.Paviri kuperetera imba inonyanya kuve mativi matatu masikati machena, imba yekurara kunze inogona kuva nemeso maviri pamusoro pechiedza chemasikati zvakajairika, kazhinji kutaura, hwindo hwakawanda, mweya unofema hauzove murombo, wakakosha masikati uye kuona.
* Dzimba dzekugara
Iyo ine yayo yadhi uye garaji Iyo inoumbwa nematatu kana anopfuura mayuniti, akabatanidzwa pamwechete nemutsara wepakati kusvika mana pasi, chimwe nechimwe chikamu chinogovera rusvingo rwekunze, ine unified graphic dhizaini uye rakasiyana portal. Townhouse ndiyo imwe yemafomu. iyo dzimba zhinji dzehupfumi dzinotora.
* Kupeta dzimba
Iko kuwedzerwa kweimba yedhorobha, pakati peimba neimba, inoumbwa nemazhinji-ane dzimba-dzimba-duplex dzimba dzakakwidziridzwa kubva kumusoro kusvika pasi. Kazhinji kazhinji kusvika kumanomwe mafurati, kubva kune yega yega unit yemaviri kusvika matatu epasi eiyo villa yakasimudzwa. kubva kumusoro kusvika pasi, uchienzaniswa nedzimba dzemadhorobha, yakazvimirira pamusoro pekuenzanisira inogona kuve yakapfuma, uye kune imwe nhanho kukurira zvikanganiso zvemataundi akapfava uye akadzika.
* Villa iri mudenga
Sky villa yakatanga muUnited States, inonzi "penthouse" kana "sky attic" pakutanga inoreva imba yemhando yepamusoro iri pakati peguta, pamusoro penzvimbo yepamusoro. yakavakirwa pamusoro peimba kana chivakwa chepamusoro-soro muchimiro cheimba. Zvigadzirwa zvinodiwa zvinoenderana nezvinodiwa zvepasi rese reimba, ine nzvimbo yakanaka yenzvimbo, maonero akapamhama, pachena uye zvichingodaro.
Kubva pane chimiro chemapurani, kutaridzika kwemusha kwakatotyora miganhu yedunhu neyepasi, iyo yepasirese imba yekuvaka dhizaini mumusika weChina wekumusha unenge wakaratidzika.
Mberi kukwirira kweiyo villa
Rutivi kukwirira kweiyo villa
Pashure: Kamudzira chimiro kirasi
Zvadaro: Maindasitiri ekugadzira chirimwa chikamu
Yakavanzika Villa Dhizaini
Villa Simbi Dhizaini Dhizaini
Villa Simbi Dhizaini Dhirowa Dhizaini